MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Lucky Data FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
PROMOTION »Lucky Data
၁။ Data Carry Pack ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
Data Carry Pack ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ဒေတာအသုံးပြုနိုင်သော Package များဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Data Carry Pack ဝယ်ယူတိုင်း 200 GB အထိ ကံထူးခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။
၃။ Data Carry Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိ MPTဆင်းကဒျ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၄။ Data Carry Pack ဝယ်ယူပါက ဘာတွေကံထူးနိုင်မှာလဲ?
Data Carry Pack ဝယ်ယူတိုင်း 200 GB အထိ ကံထူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သောကြာနေ့မှာ Data Carry Pack ဝယ်ယူပါက ကံစမ်းခွင့်ရရှိမှာပါလား?
ကံထူးထားတဲ့ဒေတာကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး လက်ကျန်ဒေတာများမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းမှာလည်း နောက်ဆုံးကံထူး သည့်ဒေတာ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်သို့တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ သြဂုတ်လ(၇)ရက်နေ့မှာ Data Carry ဝယ်ထားပြီး 500MB ကံထူးထားပါတယ်။ (၉)ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ် 50MB ထပ်မံကံထူးပြီး ယခင်500MB နဲ့ သက်တမ်းမပေါင်းသွားပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
၂၀၁၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၉)ရက်မတိုင်ခင် ကံထူးထားသည့်ဒေတာလက်ကျန်နှင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၉)ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ကံထူးသော ဒေတာလက်ကျန်များ ပေါင်းစည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် ကံထူးထားသောဒေတာ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၉။ Data Carry Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းများမှာ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ Data Carry Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Package တစ်ခု၏ သက်တမ်းမှာ (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ (၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလတွင် Package အသစ်ဝယ်ယူပါက ဒေတာ ပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေတာ သယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်) အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ်တစ်ခု ဝယ်လျှင် အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ဒေတာပမာဏများ ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ Data Carry Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
၁၃။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ ?